China HGM usoro ọrụ vibration coal feeder rụpụta na Factory | Akụrụngwa Chengxin
Isi ahụ nke ọrụ ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ na-emechi ma jikọọ ya na oghere nke silo. Thedị njiko ma ọ bụ ụdị mbupute ihe atụ dị na igwe dị na kọntaktị kpọmkwem na ihe ndị dị na okirikiri okirikiri.
Isi ahụ nke ọrụ ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ na-emechi ma jikọọ ya na oghere nke silo. Thedị njiko ma ọ bụ ụdị mbupute ihe atụ dị na igwe dị na kọntaktị kpọmkwem na ihe ndị dị na okirikiri okirikiri. A na-ebufe vibration nke efere ihapu n'ụzọ dị mma na ihe ndị echekwara na silo. Ike ume nke ike jijiji na-eme na-eme ka ihe ndị ahụ ghara ịda. A na-ebufe ihe ndị a na ntanetụ ala site na eriri akụkụ n'akụkụ abụọ nke feeder coal. Nkume nke feeder coal na eriri uzo a haziri nke ọma ma gbakọọ na-eme ka ihe ahụ site n'enyemaka nke usoro na-atụba ụda iji hụ na ngwa ngwa na nnweta ọkụ nke ihe ahụ, ọbụlagodi maka coal nwere viscosity dị elu na nnukwu mmiri mmiri. E nwere ụdị igwe abụọ: otu bụ flaapu na-ebugharị na-enweghị ihe ọ bụla, nke ọzọ bụ ụdị mkpọchi akpaka. Ihe mbụ ga-eji na-arụ ọrụ nke ibu mmiri bonding ihe na nnukwu nri ego. Automaticdị mkpọchi akpaka nwere nhọrọ nhọrọ siri ike maka okirikiri radius na ihe ntanetị: 200-1000MM curusure radius, na nke kachasị dị n'agbata eriri elu na mpempe akwụkwọ dị elu bụ 150-80 Mgbe moto ahụ kwụsịrị vibration, ihe dị na bin ga-agbachi na akpaghị aka ma kwụsị ịpị, ọ dịghịkwa mkpa ịtọ ọnụ ụzọ.
Vibration dị egwu bụ ụkpụrụ dị egwu. Igwe ahụ nwere igwe vibration, ọdọ mmiri, olulu na ihe ndị ọzọ. Ọ na - ewepụta okpukpu abụọ n'akụkụ ụkpụrụ resonance, na - eji mmiri iyi rọba iji rụọ ọrụ ike, na - arụ ọrụ nke ọma, na - enye ike dị iche iche na enweghị mkpọtụ, ma na - eme ka ị nwee ike ịmegharị ahụ iji nweta ikike dị mkpa. Ejiri onye na-agbanwe agbanwe na efere hydraulic na-agbanwe agbanwe, enwere ike belata nrụpụta kol site na opekempe na 120% nke mmepụta ahụ, iji wee ghọta usoro ọsọ ọsọ nke nri.
Akụkụ kachasị nke igwe a bụ na ọ nwere ike iri nri ozugbo ọ nweghị vibration na-agbanwe agbanwe, yana ikike njikwa nwere ike ịbawanye karịa 20% mgbe ọ na-emegharị. Ọzọkwa, mgbe a na-egbu mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ n'etiti eriri ahụ, eriri ahụ adịghị mfe ịhapụ, ọ dịghị ájá, enweghị mgbasa na mmetụta na-eguzogide. Ocheku kol adịghị mfe igbochi na njiko. Ọ dị nchebe, nchekwa nchekwa ike, arụmọrụ, yana nnukwu ọkọnọ coal, mmetọ dị ala na ndụ ogologo ndụ. A kwadebere ya site na ịgba na akpịrị ịkpọ nkụ. Mgbe mmiri dị na ngwongwo buru ibu, enwere ike ịhapụ mmiri dị na ihe ahụ. Mgbe ihe akọrọ, a na-eji ihe ịgba agba agba ihe eji agba mmiri, nke nwere ezigbo uzuzu na nsonaazụ ntụ, nke sitere na akụrụngwa nchebe gburugburu.
Coal ndepụta ọnụego t / h
Nke gara aga: Nka vibration feeder akpa
Osote: K usoro reciprocating coal feeder